Boris Johnson oo loo doortay ra'iisal wasaaraha UK. Weerarada mindiyaha oo kor u kacay. Dadka Swedish ee ku waasha di... en SRI Somaliska en mp3(23/07 a las 17:29:52) 02:24 38849170 - iVoox
A continuación: Tiradda dalbatay jaamacadaha oo sanadkan u badan dadka da'da ah. Fidista cudurka jabtada oo badan sommar-ka.Brexit bi... Cancelar 10
Descripción de Boris Johnson oo loo doortay ra'iisal wasaaraha UK. Weerarada mindiyaha oo kor u kacay. Dadka Swedish ee ku waasha di...